विराटनगर दोस्रो इपिएल च्याम्पियन - मूल्याङ्कन अनलाइन
कुमार चौलागाईं | December 30, 2017
प्रतियोगितामा सहभागी काठमाडौँ किंग्स इलेभेन, ललितपुर प्याट्रियोट्स, चितवन टाइगर्स, पोखरा राइनोज र भैरहवा ग्लाडिएटर्सलाई पछि पार्दै विराटनगर वारियर्सले उपाधि चुमेको हो । जितसँगै विराटनगरले रु. २१ लाख प्राप्त गरेको छ ।
शनिबार दर्शकले खचाखच भरिएको कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खेलाडी शरद भेषवाकरको कप्तानीमा रहेको भैरहवा ग्लाडिएटर्समाथि एक रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै राष्ट्रिय टोलीका कप्तानसमेत रहेको पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको विराटनगर वारियर्सले उपाधि जितेको हो ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १४९ रन बनाएको थियो । १५० रनको विजय लक्ष्यका साथ भेषवाकरको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको भैरहवा ग्लाडियटर्सले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १४८ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
क्रिकेट खेलको ‘एकै ओभरले हार जित दिलाउँछ’ भन्ने उक्ति आज त्रिवि खेल मैदानमा प्रमाणित भएको छ । ८ औँ ओभरसम्म आफ्नो नियन्त्रण राखेर खेलको अन्तिम २ ओभरमा टिक्न नसक्दा भैरहवा जितबाट विमुख भयो । अन्तिम २ ओभरमा मात्रै भैरहवाले ५ विकेट गुमाएको थियो ।
१५० रनको लक्ष्य पछ्याएको भैरहवाले शुरुवातमा निकै राम्रो गरेको थियो । ८ औँ ओभरमा अंशुमान रथले ३६ रन दिएपछि खेल भैरहवाको पक्षमा गएको मानिएको थियो । तर १५औँ ओभरको पहिलो बलमै भैरहवाका कप्तान शरद रन आउट हुन पुगे । त्यसपछि विराटनगर खेलमा फर्कियो । यद्यपि अन्तिम २ ओभर मात्र ११ रन चाहिएको थियो र भैरहवाको जितको सम्भावना कायमै थियो । तर, कप्तान पारस खड्काले १९औँ ओभरमा २ रन दिएर २ विकेट लिएपछि भैरहवालाई अन्तिम ओभरमा ९ रन चाहियो ।
अन्तिम ओभरमा अनिल साहको पहिलो बलमै कृष्ण कार्कीले चौका हान्दै जितको आशा कायम राखे पनि दोस्रो बलमा उनी आउट भए । निकै रोमाञ्चक बनेको अन्तिम ओभरको तेस्रो बलमा रन नै बनेन । चौथो बलमा भुवन कार्की रन आउट भए भने ५ अ‍ैँ बलमा पुनित मिश्रको विकेट गुम्यो ।
अन्तिम बलमा भैरहवालाई जितका लागि ५ रन चाहियो तर ३ रन मात्र जोड्न सक्यो र १ रनको नाटकीय जित निकाल्दै विराटनगर च्याम्पियन बन्यो ।
यसअघि विराटनगरका लागि अंशुमन रथले ४१, कप्तान खड्काले २७, हरिशंकर शाहले २२ तथा प्रनित थापा मगरले १४ तथा करण केसीले ९ रन बनाएका थिए ।
शुरुवातमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि पछिल्ला क्रमका ब्याट्सम्यानहरू सस्तैमा आउट भएपछि विराटनगरले मध्यम योगफल तयार पारेको थियो । भैरहवाका लागि पुनित मिश्र र कृष्ण कार्कीले २-२ तथा शरद भेषवाकर र आरिफ शेखले १-१ विकेट लिए ।
अघिल्लो वर्ष भएको उक्त प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण भने भेषवाकरकै कप्तानीमा रहेको पञ्चकन्या तेजले जितेको थियो । विजेता टोलीले गत वर्ष रु. ५ लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । पुरस्कारको राशि यस वर्षदेखि बढाएर रु. २१ लाख पुर्याइएको हो । यो राशि नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा सर्वाधिक हो । यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत जेठमा आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री कपको विजेताले रु. २० लाख पुरस्कार पाएको थियो ।
फाइनल खेल हेर्न शनिबार बिहानैदेखि कीर्तिपुर मैदान दर्शकहरूको भीड लागेको थियो । खेल हेर्न साधारण दर्शकको लागि रु. १०० र विद्यार्थीलाई रु. ५० शुल्क तोकिएको थियो ।
प्रतियोगितामा काठमाडौँ, ललितपुर, भैरहवा, विराटनगर, वीरगञ्ज र पोखरा गरी ६ टोलीले सहभागिता जनाएको आयोजक जोहोरा स्पोर्टस म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष आमिर अख्तरले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय टिमका कप्तान खड्का तथा राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटाले इपिएल नेपालको ठूलो क्रिकेट प्रतियोगिता भएको बताउँदै यस किसिमको प्रतियोगिताले नयाँ खेलाडीको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतियोगितामा प्रत्येक टिमले तीनजना विदेशी खेलाडीहरू समावेश गर्नुपर्ने नियम रहेको थियो । त्यसमध्ये पाँचवटाले विदेशी खेलाडीसमेत अनुबन्ध गरेका थिए । प्रतियोगितामा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र हङकङ खेलाडीले पनि विभिन्न टोलीबाट सहभागिता जनाएका थिए । इपिएलमा सहभागीमध्ये ५ टिमले विदेशी खेलाडीलाई पनि अनुबन्ध गरेका थिए ।
जितपछि प्रक्रिया दिँदै विराटनगरका कप्तान खड्काले भने, “हामीले प्रतियोगिताको पहिलो खेलबाट समातेको लयले लिग चरणका ५ र क्वालिफायर र फाइनलमा कायम राख्यौँ र उपाधि जित्न सफल भयौँ ।”
एक रनको झिनो अन्तरले पराजित भैरहवाका कप्तान भेषवाकरले आजको खेल हार्नुमा ब्याट्सम्यनको कमजोरी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
“अन्तिम १२ बलमा हामीले सम्हालिएर खेलेको भए जित सुनिश्चित थियो । हामीसँग धेरै विकेट थिए तर हामी सम्हालिन सकेनौँ,” उनले भने ।
पहिलो प्लेअफमा विराटनगरलाई नतिजा सुम्पिए पनि भैरहवाले बिहीबार सम्पन्न दोस्रो क्वालिफायरको अन्तिम ओभरमा ललितपुरमाथि ३ विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्दैै उपाधि भिडन्तमा पुगेको थियो ।
« रोल्पामा शहीदको अपमान र माओवादी-एमाले एकता (Previous News)
(Next News) मेरो देशका निर्माता »